Than Win Hlaing – “သမိုင်းတကွေ့မှ အကျော်ဇေယျအမျိုးသမီးများ” စာအုပ် ထွက်မည် | MoeMaKa Burmese News & Media
Than Win Hlaing – “သမိုင်းတကွေ့မှ အကျော်ဇေယျအမျိုးသမီးများ” စာအုပ် ထွက်မည်
မိုးမခပင်တိုင်စာရေးဆရာ သန်းဝင်းလှိုင်၏ “သမိုင်းတကွေ့မှ အကျော်ဇေယျအမျိုးသမီးများ” စာအုပ် ထွက်မည်
မိုးမခ၊ ဖောဖော်ဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၂
မှတ်စု မှတ်တမ်း သမိုင်း အချက်အလက်များ စုဆောင်း လေ့လာရေးသာရာတွင် အမည်ရသည့် စာရေးဆရာဖြစ်သည့် သန်းဝင်းလှိုင်က ၎င်းစုစည်းထားသည့် “သမိုင်းတကွေ့မှ အကျော်ဇေယျအမျိုးသမီးများ” စာအုပ်ကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မိုးမခက အဆိုပါစာအုပ်ကို ပုံနှိပ်ဖြန့်ချိရာတွင် စာအုပ်ကို စုဆောင်း သိမ်းဆည်း ဖတ်ရှုလိုသည့် စာဖတ်သူများ ကြိုတင်မှာကြားသည့် အရေအတွက်အတိုင်း ထုတ်ဝေရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်။
အီးဘွတ်များနှင့် အင်တာနက်များ ကျေးဇူးကြောင့် ပုံနှိပ်စာအုပ်များ မှာယူရောင်းချရသည့် စာရိတ်စကမှာ သီးသန့်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ Print on Demand နှုန်းဖြင့် စရိတ်ကျဉ်းကျဉ်း၊ ၀န်ကျဉ်းကျဉ်းဖြင့် စာအုပ်များကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန် စီစဉ်မည်ဟု မိုးမခက စမ်းသပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်က သမိုင်းတလျောက် ထင်ရှားသောအမျိုးသမီးများအနက် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှ ၁၅ ဦး၊ မင်းမိဘုရားများ ၆ ဦး၊ ရှေးစာဆိုတော် ၁၀ ဦး၊ စာနယ်ဇင်းလောကမှ ၂၀ ဦး၊ သမိုင်းပညာရှင် ၄ ဦး တို့ကို ကောက်နုတ်ပြီး စုစုပေါင်း အမျိုးသမီးကြီး ၅၄ ဦးတို့၏ အကြောင်းကို သန်းဝင်းလှိုင်က မှတ်တမ်းပြုစု တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
စာအုပ်ကို ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှာကြားသည့် အရေအတွက်အတိုင်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည့်အပြင် ကျောင်းများ၊ စာကြည့်တိုက်များက အလိုရှိ၍ မှာကြားပါကလည်း အဆိုပါစာအုပ်အမှာအတွက် ဒါနပြုလိုသည့် အလှူရှင်များထံ မေတ္တာရပ်ခံပြီး ထည့်သွင်းပုံနှိပ်ကာ ပေးပို့လှူဒါန်းပေးမည် ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ စာရင်းသွင်းထားသော ကျောင်းနှင့် စာကြည့်တိုက် ၂၀ အနက် ၁၀ ခုကို မိုးမခရန်ပုံငွေက လှူမည်ဖြစ်သည်။ စာအုပ်အလိုရှိသည့် ကျောင်းများ၊ စာကြည့်တိုက်များကလည်း စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။
စာအုပ် မှာ ၀တ္ထုစာအုပ်ဆိုက်၊ စာမျက်နှာ ၃၈၃ မျက်နှာ ရှိသည်။ တအုပ်လျင် ၁၅ US$ ဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ပုံနှိပ်ဖြန့်ချိမည်။
စာအုပ်အတွက် အရင်းကြေပြီး စာဖတ်သူများလက်ထဲ စာအုပ်ရောက်ဖို့၊ စာအုပ်ဖြစ်ဖို့က အဓိကဖြစ်သည်။ စာအုပ်က အမြတ်ကျန်ခဲ့လျင် စာရေးဆရာနှင့် စာအုပ်ဖြစ်အောင်စီစဉ်သူများကို ဉာဏ်ပူဇော်ခ ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်သည်။ မိုးမခကနေ မှာကြားပါ။
Pay Check to “MoeMaKa Multimedia”
MoeMaKa, PO Box 320207
အွန်လိုင်းကနေ ကြိုတင်မှာကြားရန် သည်နေရာကို သွားပါ။
One Response to Than Win Hlaing – “သမိုင်းတကွေ့မှ အကျော်ဇေယျအမျိုးသမီးများ” စာအုပ် ထွက်မည်
Lydia Lwin on February 10, 2012 at 10:39 am
This is only friendly advice.
Is that “Ah Kyaw Dayy Ya” or “Ah Kyaw Zay Ya”?
Please double check with Burmese Language Professional.
သင်္ချာဆရာကြီး၏ မှားယွင်းခဲ့သော အတွေးအခေါ်များ
ဇာဂနာစီစဉ်တဲ့ စုံနံသာမဂ္ဂဇင်း သြဂုတ်လ ထွက်ပြီ
ဘာပဲပြောပြော ၉လ ရှိပြီဆိုတဲ့ စုံနံ့သာလစဉ်မဂ္ဂဇင်း ထွက်ပါပြီ
လက်ပံတောင်းတောင်က မီးလောင်နေတဲ့ကာတွန်းများကို လက်ဆင့်ကမ်း လှူမည်
Join 93,382 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month April 2018 (143) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
ညိုထက်ညို – နံနက် ငါးနာရီ https://t.co/ObRxphJ1EN https://t.co/VrkyZ0uBjC about 8 minutes ago ReplyRetweetFavorite
မင်းခိုင် – စကားလုံးများသာ ဓားသံလျက်များဖြစ်ခဲ့သော် …… https://t.co/uueRV3K7Xq https://t.co/2MfZtMV7ay about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite
ညီမိုးဆွေ ● တတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင် တနင်္ဂနွေတရက်က (ဝတ္ထုတို) https://t.co/rtMZIoBYDd https://t.co/jY0Xtnxbzk about 11 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်းလိုင်လုဏ်ရဲ့ မြက်ပင်ကလေးရယ် … စိုးရိမ်မိတယ် … https://t.co/vCQW0CQuOg https://t.co/Cam6qHuL1W about 13 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကိုသန်းလွင် ● ဆော်ဒီမင်းသား၏ အမေရိကန်ခရီးစဉ် https://t.co/2V0n7T5ZbS https://t.co/safEaTCfYc about 13 hours ago ReplyRetweetFavorite